सानिमा जनरलको पुसमै सक्नुपर्ने साधारणसभा वैशाखमा स्थगन, बीमा समिति बाधक ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > सानिमा जनरलको पुसमै सक्नुपर्ने साधारणसभा वैशाखमा स्थगन, बीमा समिति बाधक !
सानिमा जनरलको पुसमै सक्नुपर्ने साधारणसभा वैशाखमा स्थगन, बीमा समिति बाधक !
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले कोरोनाको कारण देखाउँदै तेस्रो वार्षिक साधारणसभा स्थगित गरेको छ ।
यसअघि जेठ ११ गतेको लागि बोलाएको साधारणसभा कोरोनाका कारण स्थगित भएको कम्पनीका नायब महा प्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी प्रविण कुमार कोइरालाले बताउनु भयो ।
२९ गते बसेको कम्पनीको ९० औं बैठकको निर्णय अनुसार कोरोना महामारी फैलिएको र यो बेला सरकारले सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठि, तालिम, सेमिनार, पार्टी प्यालेस बन्द गर्न दिएको निर्देशनसँगै साधारणसभा पनि स्थगन गरेको छ ।
उहाँका अनुसार वैशाख २८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीहरुलाई सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न सक्ने अधिकारलाई यथावत राखी सभा स्थगत गरेको जनाएको छ । कम्पनीले २९ गतेबाट बुक क्लोजको सूचना जारी गरेको थियो ।
साधारणसभाले सेयरधनीहरुको तर्फबाट दुई जना सञ्चालन निर्वाचन गर्नुपर्ने भएका कारण भर्चुअल रुपमा साधारणसभा गर्न सम्भव नभएको कोइरालाको भनाइ छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले वैशाख २९ गतेदेखि सुरु गरेको बुक क्लोजको अवधि यथावत राख्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
हरेक सूचीकृत कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्म साधारणसभा सक्नुपर्ने छ । तर कयौं कम्पनीले साधारणसभा गरेका छैनन् । उनीहरुलाई अहिले कोरोनाको बाहना देखाएर साधारणसभा नगर्न सजिलो बनेको छ ।
कोइरालाका अनुुसार कोरोनाका कारण बीमा समितिले समयमा नै अनुमति नदिएका कारण सधारणसभा गर्न समय लागेको हो ।
कर्मचारीलाई कोरोना लाग्ने लगायतका कारण देखाएर समयमा नै काम नसकिएको कारण साधारणसभा गर्न समय लागेको हो ।
कम्पनीले समयमा नै आवश्यक कागजात बीमा समितिमा पेश गरेको उहाँको दाबी छ । समितिले समयमा नै आफ्नो काम सकेको थियो भने साधारणसभा यसअघि नै सकिने बताइएको छ ।
२०७८ वैशाख ३० गते ११:२६ मा प्रकाशित
उद्योग वाणिज्य महासंघले आजदेखि आइशोलेसन सेन्टर संचालनमा ल्याउने
आज फेरि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सयौँ संख्यामा खुल्यो सरकारी जागिर ! कहिलेसम्म दिने दरखास्त ? (सूचनासहित)